Ifulethi elihlala kwisakhiwo esidala - I-Airbnb
Ifulethi elihlala kwisakhiwo esidala
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguJohan & Katarina
Indawo yokuhlala ikwindawo eyayifudula iyibhari / indawo yokuhlamba impahla / igaraji. Indlu ibekwe kumbindi Askersund, malunga neemitha ezingama-200 ukusuka kwisikwere. Upholile kakhulu!
Iibhedi ezi-2 kwindawo yokulala (malunga ne-7.5 sqm enkulu)
Iibhedi ezi-2 ezongezelelweyo kwibhedi yesofa, okt iibhedi ezi-4 zizonke. Ibhedi yesihlanu inokulungiswa, kodwa ke ifumana ukuxinana kancinci. Inokwenzeka nakweyiphi na imeko! Igumbi lingaphezulu nje kwe-16 sqm enkulu.
Enye yezindlu zokhuni ezindala ngokwenene esixekweni!
Le ndlu ifumaneka kwiibhloko ezimbalwa ukusuka kwisikwere esidala se-cobblestone. Kweli cala leLilla Bergsgatan, uninzi lwezindlu ezindala kakhulu zamaplanga e-Askersund zigciniwe, apho le ndawo yokuhlala yenye yazo. Ukuba uhamba iimitha ezingamakhulu ambalwa ukuya emazantsi, uya kufika kwipaki yolwandle apho uya kufumana indawo yokudlala entle kakhulu, kunye nebhulorho ende / ibhulorho yeenyawo ekhokelela eBorgmästarholmen. Apho uya kufumana enye yeendawo zokuhlambela zesixeko. Ukuba, endaweni yokuwela ibhulorho, uya ngasentshona ukusuka kwindawo yokudlala, uya kufika echwebeni. Emva koko uhambe kunye nomzila omdala, ngoku ususiwe, umncinci-gauge kaloliwe, phakathi kwezinye izinto, uthutha i-zinc ore kwi-Zinc Mine. Kwakukho izinto ezininzi zokuthutha ukuwela iChibi iVättern ngaphambili! Kwizibuko uya kufumana iivenkile ezininzi ezimnandi kunye neendawo zokutyela. Ukuba endaweni yoko uhamba ngasempuma ukusuka kwindawo yokudlala, uya kuqala udlule isiganeko esitsha esakhiwe kwaye esimnandi, inkcubeko kunye neziko lemfundo apho, ukongeza kwi-Askersund High School, uya kufumana ithala leencwadi kunye ne-cinema, kwaye ebusika iofisi yabakhenkethi. Ehlotyeni uya kufumana iofisi yabakhenkethi kwenye yeeshedi zezibuko. Ukuba uqhubeleka phambili empuma, uya kufika eHagabadet, ibhafu yendalo entle, naseHembygdsgården. Ukongeza kwizakhiwo ezidala ezintle ezinemiboniso yemyuziyam, kukwakho nezinye izilwanyana kunye nevenkile yokutyela entle.
Ukuba uya ngasentla usuka kwindlu yethu uya kufika kwicawa yaseNorra Bergen naseSofia Magdalena. Indlela encinci entle eneendawo ezindala zezindlu ezigciniweyo zesixeko! I-Askersund yatsha yaphela ngo-1776 kwaye emva koko imephu yendlela entsha izotywa ukuze kwakhiwe isixeko esasiza kulandela. Nangona kunjalo, iiNtaba zaseNyakatho zashiywa ngaphandle komzobo wemephu njengoko iindawo ezihluphekileyo zazilapha kwaye azizange zibonwe njengendawo ebalulekileyo. Ngoku kuyamangalisa ukuba izindlu ezindala zihlala ecaleni kwendlela ejikajikayo, kwaye zihlala kwaye zikhathalelwe ngabantu abanetalente. Apha ungahamba kwenye yeendlela zegrabile zokugqibela esixekweni! Kwindawo yaseNorra Bergen kukho isikolo esidala esihle kunye nenqaba endala yamanzi. Zozibini ezi zakhiwo zineendawo zokuhlala kwaye ziza kufakwa. Kuhle!
Xa useNorra Bergen kwaye ujonge, awukho kude kwivenkile yokudlala kaJohan ekwi-Hospitalsgatan. Wamkelekile apho kwaye undwendwele isela likamabonwakude uJohan (ukusuka kuthotho lweSVT "Isela kunye namapolisa".
Umbuki zindwendwe ngu- Johan & Katarina
Sihlala kumgama ozimitha ezingama-200 kuphela kwaye sihlala sikhona!
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Askersund